Real Madrid oo dib ula wareegtay hogaanka horyaalka La Liga kaddib guul ay ka gaareen Kooxda Mallorca… +SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo dib ula wareegtay hogaanka horyaalka La Liga kaddib guul ay ka gaareen Kooxda Mallorca… +SAWIRRO
Dajiye June 24, 2020
(Madrid) 25 Juun 2020. Real Madrid ayaa dib ula wareegtay hogaanka horyaalka La Liga kaddib guul ay kaga gareen Kooxda Mallorca 2-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada 31-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid.
Daqiiqadii 19-aad Real Madrid ayaa hogaanka u qabatay dheesha, kaddib markii uu 1-0 ka dhigay da’ayarka reer Brazil ee Vinicius Junior, waxaana goolkan si qurux badan kaga caawiyay saaxiibkiis Luka Modric.
Daqiiqadii 56-aad Real Madrid ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta, kaddib markii uu 2-0 ka dhigay Sergio Ramos.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-0 ay kaga adkaatay Real Madrid kooxda Mallorca oo marti ugu aheyd garoonka Alfredo Di Stefano.
Liverpool oo saddexda dhibcood kaga qaaday kooxda Crystal Palace garoonkeeda Anfield…+SAWIRRO
Horudhac: Southampton vs Arsenal… (Gunners oo doonaysa inay waddada guusha dib ugu soo laabato kulanka ay booqanayso Saints)